Nhau - Xinzi Mvura Boka rinoita epasi rose epasi maitiro ekushandira masevhisi
Xinzi Mvura Boka rinoita epasi rose epasi maitiro ekugadzirisa masevhisi
Xinzi Rain Group, Mumwedzi uno, kambani yakamisa webhusaiti yepasi rese kuti iite epasi rese epasi maitiro ekushandira.
Kambani yedu inopa imwechete-inomira "Kupfeka Kwemafashoni" kuvakadzi pasirese, ichiita kuti vakadzi vave vakanaka, vasisina kusungwa, uye vawane kuzvivimba uye simba rakawanda. Izvo zvigadzirwa zvaisanganisira High Heels, Bhutsu, Sportswear, Underwear, Lingerie, Seamless uye Under Mahara Bras, Plus Saizi Bra & Pfupi, uye mamwe acho ave neako-ane yavo maraki.
Kambani yeXinzi Mvura inovavarira kupa imwechete-yekumira "Kupfeka Kwemafashoni" kuvakadzi pasi rese, ichiita kuti vakadzi vave vakanaka, vasisina kusungwa, uye vawane kuzvivimba uye simba rakawanda.
Xinzi Mvura yakapihwa honors yeakanakisa mhando bhizinesi, rakabudirira bhizinesi, kuchengetedza kwezvakatipoteredza bhizinesi uye epamusoro gumi marangi muChina chemukati indasitiri. Tichitarisira kumberi, Xinzi Mvura inoenderana nenguva, kuongorora nekuvandudza, uye zvishoma nezvishoma inofamba ichienda kunongedzo yekuvandudza kwemaindasitiri, kusiyanisa, tekinoroji, kugadzirisa uye kubatanidza.
Mune hutsva hutsva hwekudyidzana kwenyika, Xinzi Rain kambani yakaparura yepasi rose chipfeko chekugadzirisa sevhisi, yekutevera zvinodiwa zvakasiyana zvevanhu munyika dzakasiyana siyana nematunhu, kuti vape sevhisi yakagadziriswa sevhisi, pane izvo zvinhu, chimiro, saizi, ruvara, LOGO uye kurongedza kunatsiridza kugadzirisa, kuti upe kukurumidza, kushanda, hunyanzvi uye hwakavimbika basa rekugadzirisa.
Kuti ubvunze pamusoro petsika dzemukati dzemukati vakadzi bras uye lingerie Service: OEM / ODM, dhizaini dhizaini, kugadzira sampuro, MOQ, kugadzirwa kwakawanda, nguva yekuendesa, nguva yekutumira, vimbiso pakubhadhara kwako, fekitori, vanhu vedu, zvigadzirwa zvedu nezvimwe, pls inzwa mahara kutitumira E-mail, siya msg yako, wedzera whatsapp nhamba, kana kutifonera, unogamuchirwa!